Ihe ka ọtụtụ ná mba ahụ dị na desert Rub-el-Khali . Nke a bụ mpaghara kachasị na mbara ala nke aja na-ekpuchi. A na-achọta Ugwu dị na UAE n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke steeti. Kpochapụ ọnụ ọnụ ndị a n'okpuru ike onye ọ bụla na-eme njem, n'ihi na a pụrụ imego elu ahụ n'oge ọ bụla n'afọ. N'elu nkume, e nwere okporo ụzọ nke oge a, kpuchie ya na nsị na izute usoro iwu nchebe zuru ụwa ọnụ.
Ugwu kachasị elu na UAE
N'akụkụ obodo El Ain na State nke Oman, n'etiti ájá ájá, ugwu ugwu nke Jebel Hafeet biliri. Ọnụ ọgụgụ ya kacha elu dị elu nke 1249 mita n'elu oké osimiri. E nwere ebe a na-ekpuchi anya, na-adọba ụgbọala na obere ụlọ oriri. Na ihu igwe doro anya, echiche dị mma nke obodo na gburugburu ya ga-amalite site na ebe a, nke na-ejide mmụọ.
Ị nwere ike ịnweta ebe a site n'okporo ụzọ awara awara nke oge a, nke a na-eji agwọ serpentine. Kwa afọ na Jenụwarị, na egwu a, a na-enwe asọmpi egwuregwu n'etiti ndị na-agba ígwè, nke ndị na-esonye gburugburu ụwa na-achịkọta. N'ihe mara mma osisi ya na ihe ndi ozo di iche iche, Jebel Hafeet Mountain nke UAE ka edere na Ndeputa akwukwo UNESCO nke uwa dika akwukwo maka akwukwo ihe omumu nke uwa.
Mgbe ị na-eleta nlegharị anya, ndị njem nleta ga-ahụ ihe ndị dị otú a:
Sheikh Khalifa bin Zayed n'obí bụ ebe obibi nke onyeisi okpu eze nke Abu Dhabi .
Mercure bụ SPA-hotel, nke a na-eme atụmatụ na kpakpando 5. Enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị mma, ebe ndị na-adọba onwe ha na ebe obibi dị egwu.
Green Mubazara bụ ahịhịa ndụ dị n'okpuru ụkwụ ugwu ahụ ma bụrụ ebe nleta nleta na- ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ọdọ mmiri ọdọ mmiri. N'ebe a, ị nwere ike igwu egwu golf, nwee ntụrụndụ n'elu mmiri, ma gbaa ịnyịnya ndị Arabian mara mma. Ndị na-agba ọsọ na-enwekarị asọmpi dị iche iche.
Osisi na-emegharị ugwu n'ugwu, ndị na-agba ụba, agwọ, nkịta ọhịa na ụmụ ahụhụ dị iche iche.
Ihe ngosi ihe omuma ihe omuma - enwere ihe ndi echekwara, nke ndi oru ihe omumu na-emeputa n'oge omuma. N'ime ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ọla ndị inyom, ọkpụite, ngwá ọrụ, wdg. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme chere na ihe ndị a karịrị afọ 5000. Emere ebe a na-eli ozu nke a hụrụ na ụkwụ nke oké nkume ahụ gosipụtara ụbọchị a.
N'etiti Oman na nke elu nke Dubai, dị ka osimiri n'ụsọ Oké Osimiri India, na-ebute ugwu ugwu Khadjar, nke a na - akpọkwa Jibal Al Hajjar. A na-asụ aha nkume ahụ dị ka "Nkume", n'ihi na ọ bụ nke nkume basalt. Ihe kachasị elu a na-akpọ Jabal Shams, ọ na-ebili na elu mita 900 m n'elu larịị.
Mmiri nke mmiri, na-agbada n'ugwu ugwu, na-agbapụta osimiri dị egwu na ebe ndị mara mma. N'ebe a, mmiri mmiri na-agbakọta, bụ nke ntakịrị obere mmiri dị, nke a na-ejikọta ahịhịa na ahịhịa. Ndị na-eme njem na-ahụkarị ebe dị iche iche: ndagwurugwu mara mma dị iche iche na ohia ndị nwere nkwụ.
Osimiri dị na Jabal al-Hajar na-akọrọ mgbe nile ma mee ka mmiri ọdọ mmiri - wadi. Ndị a bụ ihe ndị na-agbagharị n'ugwu, nke ha jiri ịnyịnya anọ na-agba ịnyịnya na-agba ịnyịnya. Ndị ikuku na-eme ka ndị njem nleta mara mma na ikuku ahịhịa, ma ọ na-esiri ike ịje ije n'elu nkume na-acha ọkụ na-acha ogologo oge.
N'elu ugwu, e nwere ọtụtụ ebe ezoro ezo maka picnic, mana naanị ezinụlọ nwere ike ịga leta ha. Maka nke a, ọbụna akara ngosi pụrụ iche dị na okporo ụzọ, n'ihi ya, ọ dịghị ụlọ ọrụ na-agba ara ehi ma ọ bụ ndị hụrụ di na nwunye n'anya ga-abịa ebe a. Ndị mba ọzọ ga-agbaso iwu a.
Ebe kachasị mma ịlele ebe ahụ bụ ebe obibi Hatta . Ọ bụ obodo nta nke dị n'ugwu ya na Oman dị elu 300 mita. E nwere nri na obere hotels ebe ị nwere ike ịnọ n'abalị ahụ.
Kedu ugwu ndị ọzọ dị na UAE?
Na mba ahụ, enwere ugwu abụọ ọzọ. Ha na-agbakwa n'ókè nke Oman. Isi ihe kachasị ha na-emetụta agbata obi ha, ma site na ndị Arab Emirates njem nleta nwere ihe ha ga-ahụ. Nkume ndị a bụ:
Jabal Yibir - ugwu elu nke ugwu a na-akpọ Ras al Khaimah, nke dị elu dị 1727 m, ma na UAE, nkume ahụ adịghị elu 300 m akara. Ebe a bụ isi agha nke obodo ahụ, ya mere, a gaghị ekwe ka ndị njem nleta banye. Okporo ụzọ a na-esi ísì ụtọ na-eduga n'isi ụlọ ọrụ, nke obodo ndị ahụ dị.
Jabal-Jays (Jebel Jais) - a na-akpọ ugwu ahụ Jabal-Bil-Ais. Ogologo ya kacha elu dị 1911 m n'elu ọkwa oke osimiri. Ọ dị n'ókèala nke agbata obi, na UAE, nkume ahụ ruru akara 1000 m. E nwere ebe ntụrụndụ na ebe a na-agba golf, ebe ngwugwu dị ebe niile, a kwadebere sistemụ na snowboard.
Ebe obibi nke UAE
Palaces nke Saudi Arabia
Ụdị nke Saudi Arabia
Saudi Arabia - ebe nkiri
Ezigbo mmasị banyere Saudi Arabia
Iwu nke Saudi Arabia
Kedu otu esi eme ka pusi na akwukwo?
Kedu otu esi eme akwukwo?
Ịzụ ahịa na Bangkok
Ọrịa na-egbu egbu
Chicken na ude uto n'ime ite frying
Uwe a na-eji ejiji mmiri - uwe kachasị mma maka uwe ejiji na-enweghị ụlọ
Ndi mmadu nile na agbanwe?
Hypertrichosis na ụmụ nwanyị - akpata
Kedu otu esi ahọrọ pensụl maka nku anya?
Kedu otu esi ahọrọ Turk maka kọfị?
Nri poteto na ngwa ndakwa nri
Ham ji cheese na garlic
Atopic dermatitis na ụmụ ọhụrụ - ọgwụgwọ
Achịcha kvass - ihe kacha atọ ụtọ n'oge okpomọkụ ihe ọṅụṅụ ntụziaka
Nkwekọrịta nke anụ dị arọ
Ọ ga-ekwe omume na mkpụrụ vaịn n'oge ị na-amụ nwa?
Ebee ka etinye akwa igwe ochie?